Nkowasi: Android Booster bụ a mbụ na klas Mobile Optimization Software, nke bụ ngwá ọrụ dị ike na ya ọtụtụ atụmatụ na Atụmatụ maka gị android ngwaọrụ. Ọ na-ekwe ka ị na-adị n'elu ngwaọrụ gị, ịzọpụta batrị, naputa ebe nchekwa, iwepụ achọghị ngwa ọdịnala na igbu Filiks. The App optimizes gị ama ịrụ ọrụ. Wezụga arụmọrụ ime ngwaọrụ, o nwere ngwá ọrụ dị ka Nzuzo-echebe anyị, File Manager, Virus nyocha, App Manager, Network Manager, Battery Manager nke na-enye ike nchebe ọta gị Android Ngwaọrụ.
Easy niile-na-otu ngwa n'ihi na ebe nchekwa, boosting ọsọ, ndụ batrị arụmọrụ
Na-agụnye File Manager, Uninstaller, Network Manager, anya aga-eme, Usoro Manager, oku / SMS Blocker, ebe Nzuzo Manager na aga-eme Iji na-emechi
Na-agụnye Task egbu egbu, Memory Booster, batrị nchekwa
Kpaliri onye ọrụ na-ebuli
Ndenye ilekiri nlekota oru site kemfe n'ụlọ ihuenyo wijetị
Atụmatụ maka mma arụmọrụ
Mgbe niile na-echetara gị ka ị na-ebuli gị ngwaọrụ
2. aha: Android nnyemaaka
Nkowasi: Ebe ọ bụ na Android bụ oghe isi, ọ bụghị ezu na-enweghị ngwa. Otu Android nnyemaaka bụ ihe na ngwa na-mma gị Android ahụmahụ, fixes na-agba ọsọ ọsọ na-ebelata batrị uzo. The Coolmuster Android nnyemaaka bụ a keukwu na ukwuu bara uru ngwa. Coolmuster bụ irè Android ijikwa software na-enyere aka na-emeso SMS, media, kọntaktị na ndị ọzọ na ngwa ọdịnala na n'elu ikpo okwu.
Iweghachi na-akwado ihe n'ozuzu data nke Android ekwentị na onye na kọmputa site na ịpị mgbe retaining mma.
Ọ na-eziga na-aza, sị ozi site na PC ma na-azọpụta Android SMS ka kọmputa.
erfectly pushing videos, ihe oyiyi, ọdịyo na faịlụ site na PC na-Android.
Edezi, agbakwụnye, na ihichapụ kọntaktsị na PC. Oyiri kọntaktị ga-ofu site nnyemaaka.
Ọ nwere mmachi ọrụ
Freezes na ike Malitegharịa ekwentị ekwentị ọ bụla otu oge
3. JuiceDefender Battery nchekwa
System: Android ma ọ bụ iOS
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.8
Nkowasi: JuiceDefender arụ ọrụ nke ọma na Android ngwaọrụ njikọ, ego ojiji na batrị. The App dere oké mkpa ngwá ọrụ na atụmatụ na mfe ma dị mfe interface. The mkpa atụmatụ bụ: Data Njikọ Toggling akpaaka, 2G / 3G Toggling, Comprehensive Njikọta ahazi ọrụ, Njikọta Control, WiFi Toggle + Nchekwa onwe-gbanyụọ Option, Arụ Ọrụ log na Bluetooth Njikọta Control. Ndị ọzọ okwu, ọ na-ebelata igbapu na nje na gị mbadamba nkume ma ọ Android ekwentị batrị site powering ala na-abaghị uru stof. JuiceDefender bụ free na Ultimate na Pro upgrades iji na arọ ọrụ.
Ọ na-emepe a welcome ihuenyo ịgwa ọrụ na-ahapụ ngwa na na na na nkezi ọtụtụ nke batrị gị ojiji na àgwà ọma.
Ọ na-enye ọrụ ndu, nkwado, Nkuzi, nzaghachi, nchọpụta nsogbu, ndabere & weghachi, na ndị ọzọ.
Mgbe booting ngwaọrụ gị, ọ ada ada na-amalite, otú ị nwere ike ikwe ka Malite na booting elu nhọrọ.
Ya Ọnọdụ taabụ na-enye ohere JuiceDefender na gbanyụọ. Ọ na-switches Profaili n'etiti ike ike, Echiche Ziri Ezi, na Oke ntọala, na ike Mepee Advanced ntọala, omenala profaịlụ, Arụ Ọrụ log, ma na-ele Ịma Ọkwa.
Ọ na-egosi ihe ọmụma dị ukwuu elu n'ihu na a ederede-arọ okirikiri nhọrọ ukwuu.
4. Mpịakọta enyem
Nwere ike ikwu kpakpando: 3.9
Nkowasi: arịọrọ na ị nwere oké ọkà okwu na ekweisi na ngwaọrụ gị, nke a gbasie olu. Dabere na ngwaọrụ gị, ọ na-eme gị bịa ekwentị ụda na olu siri ike site 40%. Mbụ, enweta akara ngosi na-ekwe ka ngwa calibrate gị ụda ntọala! A na ngwa enwekwu gị ụda àgwà dị ka a ọkachamara media ọkpụkpọ. Ị ga-achọpụta bukwanu iche dị na oti mkpu gị, olu oku na ringer larịị.
Kwesiri ngosi results na ngwaọrụ gị: mma ma doo anya na ụda.
A na ngwa-enye gị ohere họrọ ihe mbo mbuli: na music, oti mkpu, Ịma Ọkwa, usoro na nche, ringer, na olu oku olu.
Ihe bụ isi UI atụmatụ mbo mbuli bọtịnụ na 6 toggles maka boosting.
A nnọọ adaba na mfe-iji ngwa.
Ọ na-achọ ọtụtụ ikikere
Ọ bombards gị na ọtụtụ mgbasa ozi
Nkowasi: Nke a ngwa-enwekwu ndị gbapụrụ ọsọ gị ngwa ngwa njikọ Ịntanetị site 50%. Ihe ọ na-eme bụ DNS cache, adị n'elu nbudata gị faịlụ, ịgbanwe Android faịlụ, ntọala na mma video-eji buffering. Ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ na-agụnye YouTube ngwa, na obere oge nke ume ọhụrụ. Ọ na-ebelatakwa gị CPU ojiji, ebe nchekwa, na ọ allocates ọhụrụ video ebe nchekwa maka GPU.
Ọ gụnyekwara a mma aha ya bụ "The Net Pinger". Ya interface bụ kensinammuo.
Ọ boosts njikọ Ịntanetị ọsọ
Okosobo DNS Cache
Okosobo nchọgharị cache
Optimizes Nchọgharị Ntọala site ibuo nchọgharị ọrụ, dị ka 2D accelerating
Nanị ikpe version
6. du Speed ​​Booster (Cleaner)
Nkowasi: Nke a bụ a Cleaner nna ukwu ahụ na-agụnye a FREE wuru na-antivirus nche atụmatụ. Ọ boosts ọsọ nke ekwentị gị site na 60%, enwekwu gị dị ohere nchekwa na ọcha junk faịlụ site na gị usoro. Ọ bụ ihe zuru ezu Android ekwentị njikarịcha ngwọta na Nchikota nke elu arụmọrụ nke ebule na ọsọ booster, ọrụ Cleaner, nchekwa (cache & junk) analyzer, nchebe nna ukwu na nche antivirus nche maka ekwentị gị.
Ọtụtụ na-akpali akpali atụmatụ
Na-agụnye integrated antivirus engine
Magburu onwe usability
Na-eme ka elu ohere na optimizes ego
Kwesịrị ikikere na echichi ogbo
Batrị nchekwa bụghị ike n'ime nke a ngwa
Game Booster na-Agbaghara
7. Network Signal Speed ​​Booster
Nkowasi: Ọ enhances gị internet nchọgharị ahụmahụ. Ọzọkwa, gị internet ọsọ kpebisiri ike site Internet Service Provider. Onye ọrụ automatizes optimizations na iwu nke na-nchọgharị gị a mkpa na gị na Android System iji hụ na ị na-kasị pụta nke ngwaọrụ gị ego na ISP Internet ọsọ maka a ire ụtọ nchọgharị ahụmahụ.
Ọ na-agụnye "The Net Pinger", nke bụ a mma nke interface bụ kensinammuo.
Ọ nwere ngwá ọrụ setịpụrụ ndekọ nchekwa data.
Nwere ikike gbanwee usoro ntọala.
Nke a bụ ikpe version.
8. ebe nchekwa Booster
Nkowasi: Ọ na-egbu-enweghị isi na-agba ọsọ ngwa. Dị ka Android nnyemaaka, ya abịa na a Quick enyem button, nke na-akpaghị aka na-ahọrọ nke égwu igbu. Ebe nchekwa Booster nwere ihe mmezi kwukwara mma.
Ị nwere ike ịhọrọ igbu na nkeji
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ya ka ọ na-egbu ihe ngwa, ị nwere ike ịtọ nchekwa fọrọ
Ịnwere ike iji aka họrọ nke ngwa ma ọ bụ Filiks na ị chọrọ tufuo
Ọ nwere ike na-dezie mmalite apps / Filiks
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.6
Nkowasi: Otu n'ime ụzọ kacha mma mbo mbuli na ekwentị gị si na-agba bụ site nhicha ya nke na-enweghị isi tụkọtara, na-enye mma ụzọ mepụta atụmatụ site a cache Cleaner. Ọ bụ a cache Cleaner for free na okosobo ohere nchekwa. The ngwa-arụ ọrụ site gwakwara ohere nchekwa site na iwepu nwa oge faịlụ ekpe site ngwa. Ịnwere ike iji aka ọcha gị na ekwentị cache faịlụ maka họrọ ngwa ma ọ bụ ikpochapụ niile faịlụ ke kiet ke otu zaa. The ngwa na-egosiputa na ngụkọta size nke ohere nchekwa na ị hapụrụ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ị na-atụle ma ọ bụrụ na ekwentị gị mkpa nhicha ma ọ bụ.
Na-akwado akpaka mode site nhicha achọghị faịlụ a anya oge.
The free version-enye gị ohere ọcha gị caches.
Mma WiFi mgbaàmà
Ụfọdụ ngwa si atụmatụ, dị ka zuru akpaaka-agbam ume, omenala gburugburu, ọzọ n'ụlọ ihuenyo wijetị na-adịghị n'ihi na free ọrụ.
10. SD Speed ​​Mmụba
Nwere ike ikwu kpakpando:
Nkowasi: Ọ na-achọ a gbanyere mkpọrọgwụ Android ngwaọrụ, na ọ gbapụrụ ọsọ elu faịlụ-transfer udu na n'ozuzu na-agụ-dee ọrụ nke SD kaadị site boosting SD kaadị si ndabere cache size. Ị dị nnọọ mkpa na-emeghe ngwa, setịpụrụ n'ime a elu cache size ma lezie, see bọtịnụ.
Nwere nhọrọ na-akpaghị aka tọgharịa ka anya dị ka ị na-amalite ruo ngwaọrụ gị
Na-agụnye nza nke na-akpali akpali atụmatụ
Azọpụta gị oge na ego n'ihi na ọ boosts gị SD kaadị
Ọ naghị arụ ọrụ niile gam akporo ngwaọrụ.
> Resource> Android> 10 Best Booster maka Android